Badhaasa Noobeelii: MM Abiy Ahimad miidiyaatti dubbachuu diduun 'rakkoo guddaadha' - BBC News Afaan Oromoo
Badhaasa Noobeelii: MM Abiy Ahimad miidiyaatti dubbachuu diduun 'rakkoo guddaadha'
6 Muddee 2019
Image copyright STIAN LYSBERG SOLUM
Goodayyaa suuraa Dura teessuu koree badhaasa Noobeelii suuraa MM Abiy qabattee
Sirna badhaasa Noobeelii Mudde 9 Norweey Oslootti raawwatu irratti MM Abiy Ahimad miidiyaatti dubbachuu diduun sagantichaaf 'rakkoo guddaadha' jedhe Koreen badhaasichaa.
Badhaasa Noobeelii Nagaa bara kana kan injifatan MM Abiy Ahimad sirna badhaasa kanaa irratti kan argaman ta'ullee, miidiyaa fuulduratti bahanii gaaffii gaafatamuuf hayyamamoo akka hin taane korichi mirkaneesseera.
Direektarri Inistitiyuutii Noobeelii Norweejiyaanifi barreessaan koree badhaasa Noobeelii Olaav Njoolstad, MM Abiy ibsa miidiyaaleef kennamu irratti hirmaachuuf "tole osoo jedhanii silaa hawwii koo ture" jechuun Korporeeshinii Biroodkaastiingii Norweejiyaan (NRK)'itti himan.
Pirees Seekreetariin waajjira MM Itoophiyaa dhimma kanarratti BBC'f yaada kennuurraa of qusatanii jiru.
Oduu biroo kana waliin walitti dhiyaatan dubbifadhaa:
'Ida'amni Lammaa Magarsaa hir'ise ida'ama miti'
Badhaasni Noobeelii Itoophiyaaf bu’uura seena qabeessadha
Akkaataa sagantaa sirna badhaasa Noobeeliitti, namni badhaasicha injifate osoo badhaasa sana hin fudhatiin dura miseensota koree Noobeelii waliin ta'uun miidiyaaleef ibsa kenna.
Gaaffii gaazexeessitoonni gaafataniifis deebii kenna. Sagantaan kun kan kallattiin tamsa'u ture.
MM Abiy Ahimad sagantaa ibsa miidiyaaleef kennamu kanarratti hirmaachuuf hayyamamoo ta'uu dhabuurraa kan ka'e, sagantaan kun haqamuu NRK gabaaseera.
MM Abiy Mudde 9 erga badhaasicha fudhatanii booda sagantaa dirree irrati raawwatu, kan nama badhaasni Noobeelii maqaa isaatiin mogga'e, Alfired Nobeel yaadachuuf taasifamu irrattis hin argamani.
Sagantaa kanarrattis barattoonni Norweey nama badhaasicha injifate waliin gaaffiifi deebii taasisuun baratamaa ture. Sagantichi bakka MM Abiy hin jirretti raawwata.
Goodayyaa suuraa Agarsiisaa waa'ee injifataa badhaasa nobeelii baranaa qophaa'e
Sagantaan biraa sirna badhaasa Noobeelii baranaaf qabame agarsiisa suuraafi barreeffamaa waa'ee injifataa badhaasichaa mul'isuu kan jiddugala nagaa Noobeelii keessatti qophaa'e ture.
Agarsiisi kun nama badhaasicha injifateen kan banamu yoo ta'u, sababa MM Abiy Ahimad hayyamamoo hin taaneef miidiyaafi uummataaf cufaa ta'eera.
Maaliif miidiyaa lagatan?
Barreessaan koree badhaasa Noobeelii Olaav Njoolstad, MM Abiy Ahimad sagantaa ibsa miidiyaalee irratti kan hin argamne guyyaa sagantichi raawwatu barfatanii waan gahaniif jechuun dubbatanii ture.
Boodarra garuu "tarii sababa rakkoo biyya keessatti isaan mudachaa jiruu, akkasumas ilaalchaafi amantaa dhuunfaa isaaniirraa ka'uun ta'uu akka danda'un yaada," jechuun himaniiru.
MM Abiy Ahimad badhaasa kana injifachuu isaanii ilaalchisee yaadota adda addaatu kennamaa ture.
Rakkoolee nageenyaa biyya keessatti isaan mudaachaa jiru irraa kan ka'e badhaasni kun hin maluuf jechuun kanneen badhaafamuu isaaniitti walii hin galle jirru.
'Wantoota ni ta'a jedhamee hin yaadamne dalagan'
Kanumarraa ka'uun gaaffii jajjabaa gaazexeessitootarraa isaan mudachuu danda'u maqsuuf miidiyaatti dubbachuu didan kan jedhanis jiru.
Dubbii Himtuun Waajira Ministeera Muummichaa Biillenee Siyyum "hojii hedduu" dursi kennamuuf malu waan jiruuf ministirri muummee sagantaawwan hunda irratti argamuu hin danda'an jechuun Reuters'tti dubbatte.
"Yeroo biyya keessatti dhimmoonni dursi kennamuuf malaniifi xiyyeefannoo cimaa barbaadan hedduun jiranitti gaggeessaan biyyaa tokko guyyoota baayyee haarsaa gochuun rakkisaa ta'a," jechuun ibsiti Biilleneen.
"Kana waan ta'eefis haaluma Inistitiyuutii Noobeeli waliin mariyachuun waliigalameen aadaa Noobelii kabajuudhaaf ministirri muummee sagantaawwan barbaachisoo ta'aniifi dursi kennamaniif irratti ni hirmaatu."
Sirni badhaasa Noobeelii bara kana Mudde 9, Wiixata Norweey magaalaa Oslootti raawwata.
11 Onkololeessa 2019
Dr Henook Gabbisaa: 'Ida'amni Lammaa Magarsaa hir'ise ida'ama miti'
30 Sadaasa 2019
'Fuudhee dhala godhadha jedhee yaadee hin beeku'
"Iyyaruusaaleem magaalaa guddoo adda hin qoodamne Israa'eeliiti" Donaald Tiraampi
'Dubartii tahuukoo mirkaneessuuf poolisiin uffata akkan baasuuf na dirqisiise'
Reeffi dogoggoraan lafa awwaalchaa Islaamaatti awwalame qotamee bahe
Bilbilli balbalaa odeeffannoo dhuunfaa Feesbuukii fi Guugilii kennaa jira
Ajjeefamteetti kan jedhamte adaadaan Kiim TV irratti mul'atte
Itoophiyaan namoota dhibee Koronaavaayirasiidhaan shakkaman 4 adda baasuu beeksifte
Argannoon dhibee koronaavaayirasii yaaddoo uumeef fala ta'aa?
Wal'aansi umrii da'umsaa dubartootaa dheeressa jedhame gaaffii kaase